UMTSHAKAZI UMANGALISIWE 'YITHI EWE KWISINXIBO' KU-HLONIPHA UNYANA OLATE - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato UMtshakazi Emangaliswe ngu-'Yithi Ewe Kwimpahla 'Ukuhlonipha uNyana oMva kwiZithombe zoMtshato eziNtsholongwane
UMtshakazi Emangaliswe ngu-'Yithi Ewe Kwimpahla 'Ukuhlonipha uNyana oMva kwiZithombe zoMtshato eziNtsholongwane
UAna watyelelwa ngokungalindelekanga ngu-Ewe kwiLokhwe: I-Atlanta kwiintsuku ezimbini ngaphambi komtshato wakhe. Ityala: IBrandy Angel Photography
Ngu: Kaitlin Jones 01/22/2016 ngo-9: 09 AM
Ngo-Okthobha ophelileyo, iifoto zomtshato ka-Anna Bozman Thompson zahamba zangena kwintsholongwane ngendlela echukumisayo awamhlonipha ngayo unyana wakhe ongasekhoyo uLake, awayephulukene naye ngenxa yomhlaza kwiinyanga nje ezintlanu ezidlulileyo. Kodwa yintoni abalandeli bebali lika-Anna ababengayazi, kude kube ngoku, kukuba kwiintsuku ezimbini ngaphambi komtshato wakhe wanikwa isipho esikhetheke kakhulu esivela kubantu kwi-TLC Yithi Ewe kwisinxibo: IAtlanta !
Kwiintsuku ezimbini kuphela ngaphambi komtshato wakhe ka-Okthobha u-9, umtshakazi wafumana isimanga esothusayo xa uLori Allen noMonte Durham Yithi Ewe kwisinxibo: IAtlanta wabonisa emnyango ukuba enze i-pop-up boutique kwigumbi lakhe lokuhlala. Isiqendu esibonisa uhambo luka-Anna kunye nomyeni wakhe uTravis kunye nokukhethwa kwengubo ka-Anna yokuhamba ebusuku namhlanje kwi-TLC, kwaye Ingcaciso ukwazile ukuncokola nomtshakazi kwaye wafunda ividiyo yakhe SYTTD amava.
Umtshakazi wabelana neLizapourunemerenbleus ukuba yayiyinto eyothusayo kunye neyothusayo ukufumana abakwaMyeni ngabasebenzi bakaLori kwikhaya likanina kwiintsuku ezimbini ngaphambi komtshato, kodwa wayelungele umngeni wokufumana ilokhwe yomtshato egqibeleleyo- kwaye wenza njalo!
Ngokwahlukileyo kuninzi lwabatshakazi kuthotho lwe-TLC, sele sibonile ukuba yeyiphi ilokhwe uAnna athe ewe enkosi kwiifoto zakhe zomtshato ovela kumfoti oqeqeshiweyo uBrandy Angel owangena wentsholongwane ngo-2015. Umtshato ovela kuBrandy, kokukhona sithandana.
UTravis noAnna batshata ngo-Okthobha 9, 2015 kwifama engaphandle kweAthens, GA. Ityala: IBrandy Angel Photography
UAnna noTravis bebesoloko bekunye phantse iminyaka elishumi kwaye bebehleli kunye ngakumbi kunabantu abaninzi ebomini, uBrandy wabelane neKnot. Xa uAna wadibana noTravis wayenonyana ogama linguLake. UTravis wathandana noAnna kunye neChibi ngokukhawuleza, kwaye akubanga thuba lide ngaphambi kokuba bamkele abantwana babo ababini kwaye uTravis wamkela neLake.
Esi sibini saceba ukutshata, kodwa iminyaka eliqela uAnna noTravis bawubeka emtshatweni wabo ngelixa unyana wabo wayesilwa nobomi bakhe emva kokuba efunyaniswe enomhlaza wobuntwana. Nangona unyana wabo walwa kakuhle, uLake wafa ngaphambi kokuba abone abazali bakhe batshata.
Emva kokuthatha ixesha lokuqhubekeka nelahleko yabo, aba babini baqala ukucwangcisa umsitho womtshato kwakhona, bengazi ukuba iLake iya kuba nefuthe elinjani kubomi babo ngokubakho kwiifoto zabo.
UAnna wayecele umfoti wakhe ukuba afake ichibi kwiifoto zomtshato kunye noBrandy ekwabelwana naye ngeNqaku, ndacela umyili wemizobo ukuba andincede ndiyifumane ngokuchanekileyo kwaye ndothuswe ziziphumo. Umfanekiso ophelileyo ngobunono bonyana ongasekhoyo wesibini kwiifoto zabo zosapho bagqibezela imifanekiso kunye no-Anna, Travis, Trindon kunye noCambree, kwaye bavusa ukuthandwa kwabo. Ndiyazi ukuba ichibi livuya kakhulu kukuqwalaselwa komfanekiso kunye nendlela ekuthuthuzela ngayo uAnna, wongeze watsho.
U-Anna wacela umfoti wakhe ukuba afake unyana wakhe ongasekhoyo kwiifoto zakhe zomtshato. Ityala: IBrandy Angel Photography
Kodwa enye into yafunyanwa kwiifoto ngosuku lwabo lomtshato. Ngokumangalisayo kwiifoto ezilandela umsitho kukho ukukhanya okuhle okukhanyayo kwiifoto ezingatshintshi imilo okanye umbala kwaye zihamba zijikeleze usapho, ucacisa uBrandy. Uthe ichibi liza kubonakala ngendlela entle ngala mini kwaye wenza njalo.
UAna wabelana ngeKnot ukuba abavelisi Yithi Ewe kwilokhwe ndeva ngebali lakhe ngeRally Foundation, engumbutho oxhasa ngemali uphando kwaye uphakamisa ulwazi ngomhlaza wabantwana, kwaye unceda iintsapho ezihamba nomhlaza wobuntwana. Iqela emva koko lasebenza ngokubambisana nomama ka-Anna ukumangalisa umtshakazi ngokulungiselela umtshakazi endlwini kanina kwiintsuku ezimbini ngaphambi komtshato!
ULori kunye noMonte bathi Ewe kwisinxibo: IAtlanta yamothusa uAnna ekhayeni lakhe enxibe iilokhwe zomtshato. Ityala: TLC
Monte, Lori, kunye Yithi Ewe kwilokhwe Iqela lize lilungiselele ngee-racks zemihombiso emihle yomtshato yazo zonke izinto ezisikiweyo kunye nezitayile kunye nezinto ezikhazimlayo kunye neekhuselo ezifanayo ukwenza isiko SYTTD kufanelekile. Umahluko kuphela ekubeni babencitshisiwe kwigumbi lokuhlala likaMama-woMtshakazi endaweni yooMyeni nguLori!
Ndiyazi ukuba ndiza kufumana umntu endimthandayo, kodwa ndandinoyika kakhulu malunga noku kufaneleka kunye notshintsho kwithuba elifutshane, u-Anna uxelele i-Knot. Kodwa i SYTTD wenze umlingo wenzeka!
Kunye neqela lakhe lababukeli elinomama wakhe, utata wakhe, umntakwabo, umhlobo osenyongweni, kunye nentombi eneminyaka emibini uCambree, owayengayazi ncam ukuba kwenzeka ntoni, uAnna wazama iilokhwe kunye nezixhobo kwigumbi lokuhlala likamama wakhe de Ufumene umdlalo ogqibeleleyo.
U-Anna uyimodeli yelokhwe yakhe yomtshato kamama, utata, umntakwabo kunye nomhlobo osenyongweni. Ityala: TLC
UMonte wamnika imiyalelo ecacileyo yokungahoyi iithegi zamaxabiso, kuba nayiphi na ilokhwe awayeyifuna wayeyiphiwe, kwaye uAnna uxelele i-Knot, ndathi ewe kowesithathu, ke ndizamile kwilokhwe ezintathu. Intle kakhulu ivenkile ezivelelayo!
Umtshato omncinci nosondeleyo wawubanjelwe kwifama engaphandle kweAthene, eGeorgia kwindawo eyayinefula. UAnna wayekhathazeke kakhulu ngokuthatha iifoto zosapho ngala mini okokuqala ngaphandle kweLake, umfoti uBrandy wabelana.
Ndandihlala ndimfuna apho, uAnn uxelele i-Knot. Kodwa ndicinga ukuba ilokhwe kunye nokuziva nje ukuba uLake wayenenxaxheba kuyo yonke loo nto kwenza ukuba umfanekiso uphume njengoko unjalo, wongeza ukuba wayengonwabanga sisiphumo. Umfanekiso wawungaphezulu kunokuba ndandicinga ukuba kuya kuba njalo.
Xa sithetha ngoLori noMonte kunye nayo yonke Yithi Ewe kwisinxibo: IAtlanta Iqela, uBrandy wongeze, Banika uAnna ilokhwe yamaphupha akhe. Ngokwenene lwalungumhla womlingo ogcwele uthando, usizi, ukukhunjulwa kunye nokuqala okutsha. UAna wayengumfanekiso ogqibeleleyo womtshakazi kwaye ndiyazi ukuba iLake lalikhanyisa kuthi sonke ngala mhla.
Bukela ikliphu engezantsi ukuze uthabathe amanyathelo akhethekileyo ka-Anna Yithi Ewe kwisinxibo: IAtlanta Isiqendu esidlala ngokuhlwanje ngentsimbi ye-9 ngokuhlwa kwe-EST kwi-TLC!
Izipho zoodade bomtshato weKrisimesi
yonke imitshato yokufika kwindawo ekuthiwa yeyaseCaribbean
Utata intombi idanisa kamnandi 16
Izimvo zokuhombisa iikhitshi lase-Italiya